December 2021 - Page2of 18 - ပညာ ပါဝါ
မိခင်တစ်ယောက်၏ အလှပဆုံးသော မုသားစကားကြီးရှစ်ခွန် (ကျွန်တော်ကလေးဘဝအရွယ်တုံးက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ အရမ်းကောင်းလို့ အချိန် ၂ မိနစ်လောက်ပေးဖတ်ပါ)
မိခင်တစ်ယောက်၏ အလှပဆုံးသော မုသားစကားကြီးရှစ်ခွန် (ကျွန်တော်ကလေးဘဝအရွယ်တုံးက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ အရမ်းကောင်းလို့ အချိန် ၂ မိနစ်လောက်ပေးဖတ်ပါ) ကျွန်တော်ကလေးဘဝအရွယ်တုံးက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာ နေ့စဉ်ထမင်းနပ်မှန်အောင်စားဖို့တောင် မသေချာတဲ့နေ့တွေရှိခဲ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့အမေကတော့မကြာခဏ သူ့ပန်းကန်ထဲက ထမင်းတွေကိုယူယူပြီး ကျွန်တော့်ထဲအမြဲထည့်ထည့်ပေးတတ်တယ် ။ ပြီးရင် အမေပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ် ။ “စားငါ့သား အမေ
မနက်က ရွှေတိဂုံဘုရားအနီး ကြက်သီးထဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခု ( ချယ်ရီ ပန်းတွေ…………အစား သပြေပန်းတွေ ပွင့်နေပြီ……ဒီလမ်း ဘယ်လောက် ကြမ်းကြမ်း ကျုပ်တို့ ရအောင် တက်မယ်ဗျာ……)
မနက်က ရွှေတိဂုံဘုရားအနီး ကြက်သီးထဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခု ( ချယ်ရီ ပန်းတွေ…………အစား သပြေပန်းတွေ ပွင့်နေပြီ……ဒီလမ်း ဘယ်လောက် ကြမ်းကြမ်း ကျုပ်တို့ ရအောင် တက်မယ်ဗျာ……) မနက်ကရွှေတိဂုံဘုရားအနီး မှာတက္ကစီတစ်စီးပျက်သွားတော့ လမ်းတွေ ပိတ်တာပေါ့။ ပျက်သွားတဲ့တက္ကစီကို ယာဉ်မောင်းက တစ်ယောက်တည်းတွန်းတယ်။ ကုန်းတက်ကြီးဆိုတော့ ဘယ်အဆင်ပြေပါ့မလဲ အနီးမှာရှိတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲက ပြေးလာပြီကူတွန်းတယ်။ ထင်သလောက် မတွန်းနိုင်ဘူး အဲဒီမှာ
သင့်ရဲ့ပထမဆုံးကလေး က သင့်မိသားစုကိုဦးဆောင်နိုင်စေချင်လျှင် ဒါတွေသင်ထားပေးပါ…..
သင့်ရဲ့ပထမဆုံးကလေး က သင့်မိသားစုကိုဦးဆောင်နိုင်စေချင်လျှင် ဒါတွေသင်ထားပေးပါ….. မိဘတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးတွေ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး လိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ချင်ကြမှာပါ။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမချင်း ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်တတ်ဖို့က မိဘတွေနဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့သောမိသားစုတွေမှာ သွေးသားအရင်းအချာ မောင်နှမတွေဖြစ်ပေမယ့်လို့ သူစိမ်းတွေလောက် ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုမရှိတာကို တွေ့နေရတတ်ပါတယ်။ မိဘတိုင်းက မောင်နှမချင်းချစ်ခင်တတ်ဖို့ကို သူတို့ရဲ့ပထမဆုံး ကလေးလေးကနေ သင်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကလေးလေးတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယေက် ချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်ဖို့က ပထမဆုံးကလေးပေါ်မှာ
တော်တန်ရုံမသိကြတဲ့ အော်တိုဂီယာတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ” L ” ဂီယာကို ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးပြုရမလဲ ဆိုတာ….
တော်တန်ရုံမသိကြတဲ့ အော်တိုဂီယာတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ” L ” ဂီယာကို ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးပြုရမလဲ ဆိုတာ…. ကုန်းအတက်တစ်ခုကို ကားမောင်းတက်ရင်း အင်ဂျင်ထိုးရပ်သွားပြီး ကားက နောက်ပြန်လှိမ့်တော့မလို ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာ ကုန်းအတက်မှာ ထိုးထားတဲ့ ဂီယာရွေးချယ်မှု မှားယွင်းနေတာကြောင့် အင်ဂျင်က ကုန်းတက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပါဝါ လုံလောက်အောင် ထုတ်မပေးနိုင်ရာမှ ဆက်မရုန်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်
အသက် (၉၀) ကျော် အမေအိုကို သွားတိုက်ဆေးရောင်းပြီး ရှာကျွေးနေရတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီးအဘ ဦးလှမိုး..
အသက် (၉၀) ကျော် အမေအိုကို သွားတိုက်ဆေးရောင်းပြီး ရှာကျွေးနေရတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီးအဘ ဦးလှမိုး.. အသက် (၉၀) ကျော် အမေအိုကြီးကို သွားတိုက်ဆေးရောင်းပြီးရှာကျွေးနေတဲ့ အသက်(၇၀) အရွယ် အဘ ဦးလှမိုးပါ။ အဘက လူရွှင်တော်တဦးဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပြီး အရင်တုန်းက ပွဲနားရင် ဈေးထွက်ရောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ “အဘဦးလှမိုးက သံစူးထားတဲ့အပြင် ဆီးချိုလဲရှိနေတော့ ခြေထောက်က ယောင်ကိုင်းပြီးယင်ကောင်တွေ
အခုလိုအရာရာအတုလုပ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ပဲပင်ပေါက်ကို ပဲလုံးစေ့ ရေစိမ် အညှောင့်ပေါက် ဈေးကွက်ထဲရောက်လို့ ထင်နေကြတုန်းပဲလား..
အခုလိုအရာရာအတုလုပ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ပဲပင်ပေါက်ကို ပဲလုံးစေ့ ရေစိမ် အညှောင့်ပေါက် ဈေးကွက်ထဲရောက်လို့ ထင်နေကြတုန်းပဲလား.. အစားအသောက်တွေကို အတုလုပ်တာ၊ ဆေးထိုး၊ ဆေးရည်စိမ်၊ အရောင်ဆိုး၊ ပေါက်ကရတွေနဲ့ ရော၊ နယ်စပ်က အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းတဲ့ အစားအသောက်တွေ တင်သွင်းတာ စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြတဲ့ နေရာမှာ စာဖတ်သူများကို ကြောက်အောင် လန့်အောင် ဖော်ပြနေခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။
သဘာဝ သယံဇာတပေါကြွယ်လှတဲ့ မြန်မာပြည် မှ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ရွှေထွက်ရှိရာ ဒေသများ..
သဘာဝ သယံဇာတပေါကြွယ်လှတဲ့ မြန်မာပြည် မှ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ရွှေထွက်ရှိရာ ဒေသများ.. ကချင်ပြည်နယ် = ကာမိုင်း၊ ခေါင်လန်ဖူး၊ ချီဖွေ၊ ဆော့လော်၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်၊ တနိုင်းဒေသ၊ နောင်မွန်၊ ပူတာအို၊ မချမ်းဘော၊ ဖားကန့် ၊ ဗန်းမော်၊ မိုးကောင်း၊ မံစီ၊ မိုးညှင်း၊ မိုးမောက်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဝိုင်းမော်၊
အခု CB ဘဏ်ရဲ့ ကြေညာချက်ကအရပ်စကားနဲ့ ပြောရင်နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက် ရိုက်တာ… လူလည်ကြတာ… လူပါးဝတာ…
အခု CB ဘဏ်ရဲ့ ကြေညာချက်ကအရပ်စကားနဲ့ ပြောရင်နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက် ရိုက်တာ… လူလည်ကြတာ… လူပါးဝတာ… CB bank ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်က အသုံးပြုသူတွေအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်နေတာလို့ ဘဏ်အသုံးပြုတွေဝေဖန် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CB Bank က ဒီဇင်ဘာ ၁၅ နောက်ပိုင်းထည့်သွင်းသည့်ငွေများကို ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်ငွေသားအပြည့်ထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်နေ့မှာ တစ်နေ့လျှင် ၂ ဘာသာနှုန်းဖြင့်ကျင်းပတော့မည့် အခြေခံပညာအဆင့် နှစ်ဝက်စာမေးပွဲများအကြောင်း…
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်နေ့မှာ တစ်နေ့လျှင် ၂ ဘာသာနှုန်းဖြင့်ကျင်းပတော့မည့် အခြေခံပညာအဆင့် နှစ်ဝက်စာမေးပွဲများအကြောင်း… ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာအဆင့်နှစ်ဝက်စာမေးပွဲများကို လာမယ့်ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှစ၍ တစ်နေ့လျှင် ၂ ဘာသာနှုန်းဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်တယ်လို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “ဇန်နဝါရီလ ၅၊ ၆၊ ၇ ရက်မှာစစ်ဖို့စာထွက်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်။ ဒီနှစ်ဝက်စာမေးပွဲကို ပေါ့နော်။ အဲဒါကဘယ်လတွေအထိလဲဆိုတော့ကျောင်းဖွင့်တဲ့ရက်ကစပြီး
လူတိုင်းစားစေတဲ့စေတနာနဲ့ ဒံပေါက်ကို (၅၀၀) ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးတာတောင် စကားကို မဆင်မခြင် ပြောသွားကြတဲ့ လူတချို့…..
လူတိုင်းစားစေတဲ့စေတနာနဲ့ ဒံပေါက်ကို (၅၀၀) ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးတာတောင် စကားကို မဆင်မခြင် ပြောသွားကြတဲ့ လူတချို့….. သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်ထဲမှာ ကမ္ဘာ့ဈေးအသက်သာဆုံး ဒံပေါက်ကို ရောင်းချပေးခဲ့တဲ့ YG ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့မှ လူငယ်တယောက်ရဲ့ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ အကြောင်းကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. “လူတွေက ခက်တယ်ဗျာ။ ဒီနေ့အဝစား ၅၀၀ ထမင်း ဟင်းအပြင် အရံဟင်း